Soomaalida koonfur afrika oo lagu adkeeyay qaadashada sharciga qaxootiga – Biyacade
December 28, 2014 December 28, 2014 biyacade
Soomaalida koonfur afrika oo lagu adkeeyay qaadashada sharciga qaxootiga
Bilaahwgii sanadkaan dhibaato fara badan ayaa soo wajahday soomaalida koonfur afrika kadib markii la adkeeyay qaadashada sharciga baasaboorka ee qaxootiga dalkaasi.
Soomaalida koonfur afrika ayaa helay baasaboor ay ugu safri karaan eheladooda kala jooga dunida intiisa kale sida wadamada afrika iyo aasiya waa hadi ay VISA ka helaan e’.
Madaxweeynaha koonfur afrika jokob zuma ayaa soo rogay xayiraad ku aadan bixinta baasaboorada ka gadaal markii la helay baasaboorka daadsan dunida dacaladeeda sida BAZIL oo ku eedeysan I dowlada koonfur afrika in aysan xakameyn karin sharciyada ay siiyaan qaxootiga.
Warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in jokob zuma uu la kulmay hey’adda UN ka ee qaabilsan qaxootiga kaasoo ay uga doodayeen sidii ay ka yeeli lahaayeen qaxootiga ku soo badanaya dalka koonfur afrika.
Jokob zuma ayaa ogolaaday in la qaado dhamaan qaxootiga koonfur afrika ku nool kuwaasoo ay soo wajahday xaalad xumo la xiriirta amaan darri iyo ajaanib naceeyb.
Zuma ayaa codsaday in laga ilaaliyo war baahunta qaadista qaxootiga loo qaadayo ameerika iyo kanada.
Inta la og yahay 25 kun qof qaxootiga afrikaan ah ayaa laga qaaday dalka koonfur afrika kuwaasoo u badnaa soomaali laga soo bilaabo 2011 oo la qaaday in ka badan 11 kun qof qaxooti halka 2013,2014 la qaaday 14 kun qof qaxooti.
Zuma ayaa diiday in uu dib u qaabilo qazooti dambe waxeeyna wararka inta ku darayaan in qaxootigu sii socon doono ilaa 2017.
Madaxweeynaha ayaa sheegay in wixii ka dambeeya 2017. Ay qaxooti jiri doonin wadankana lagu joogi doono sharciyada qof walba dalka uu ka yimid, qofkii aan heeysan sharci uu wadanka ku joogo ama ogolaansho dolwadeed ayaa laga musaafurin doonaa dalka.
Tani ayaa cabad ku noqon doonta soomaalida koonfur afrika oo intooda badan ku soo baraaruga dhibaatada marka ay soo food saarto haba u badnaadeen dhalin yarro aan sharciga dalka aqoon u laheyn kuwaasoo nolol ka soo raadiyay dalka koonfur afrika
Previous Swiro soomaaliya bilicda dhulka soomaalida
Next MAXAA KAAGA BAXAY